Xeerka Biilka iyo Ururinta HMC iyo UWMC | UW Medicine
Xeerka Biilka iyo Ururinta HMC iyo UWMC (PDF)
Iskaashiga shaqada University of Washington Medical Center (UWMC) iyo Harborview Medical Center (HMC) waa inay horumariyaan caafimaadka dadwaynaha iyaga oo faafinaya aqoonta caafimaadka, iyaga oo siinaya daryeelka koowaad iyo ka takhasuska oo heersare ah dadkan gobolka, sidoo kalena soo saaraya dhakhaatiirta, saynisyahanada iyo xirfadlayaasha kale ee caafimaadka ee mustaqbalka. Si shaqadaasi u suurtogasho isbitaalku waxa uu u baahan yahay in uu dhaqangaliyo xeer ururinta daynta kaasi oo:
Adeegyada Dhaqaalaha Bukaanka ee UWMC iyo HMC waxa ay kharashka ku dallici doonaan gobolka, fadaraalka iyo shirkadaha ganacsiga ee caymiska. Bukaanka uma qabsanayno wax kharash ah ilaa aanu caymiska kala baxno, taas oo ay kamid tahay diidmada rafcaanada laga qaatay. Markasta oo ay macquulka tahay, waxaanu noqonayaa mid u doodaa xaqa bukaanka si aanu ugu soo dhicino kharashka caymiska kahor inta aananu u beddelin lacagta mid qofku iska bixinayo.
Xisaabaadka qofku iska bixinayo lacagta waa in lagu bixiyo 30 maalmood laga bilaabo marka ay soo gaadhay bayaanka ugu horreeyey haddii aan heshiis kale la galin.
UWMC iyo HMC waxay diraan bayaanada 30-kii maalmoodba mar ilaa 120-ka maalmood ee wareegga daynta bixinta laga gaadhayo.
Bixinta xog dheeraad ah ku dallicidda biilashada bixiye kale ama caymis.
Bayaanka afraad waa “Wargelinta ugu Dambaysa” oo la socodsiinaysa dammiinka in xisaabtoodii lagu wareejinayo hay’ad ururisa daynta oo bannaanka ah haddii ayna bixin lacagta ama ayna heshiis bixineed ku galin muddo 30 maalmood ah.
Haddii aan laga soo jawaabin ama aan lacagta oo dhammaystiran la bixin waxaykeeni kartaa in lagu wareejiyo hay’adda ururisa daynta.
Dhammaan bukaanada sheegta dhaqaale xumo waxaa dib u eegid lagu samayn doonaa inay heli karaan Kaalmo Dhaqaale iyo/ama Medicaid. Waxaa la bixin karaa Kaalmada Dhaqaalaha wakhti kasta, xataa marka la diro hay’dda daynta ururisa balse waa in la codsada intaan xukun maxkamadeed dhicin.
Ikhtiyaarada Diyaarka u ah Lacagta Bukaanka Iska Bixiyo:
UWMC iyo HMC way qaataan lacagta cad, jeeg ama kiridhit kaadh. Ku bixinta kiridhit kaadh waa la oggol yahay wixii taleefanka ah ama bixinta biilka onlaynka ah. Qaybaha bukaanka waxaa la bixinayaa marka ugu horreysa ee biilka kadib ka bixidda isbitaalka la helo haddii ayna jirin heshiis la isla gaadhay ama arji Kaalmo Dhaqaale oo la gudbiyay.
Heshiisyada bixinta kharashka waxaa lagu sameeyay codsi bukaanka ka yimi ee Waaxda Adeegyada Dhaqaalaha Bukaanka ah. Tani waxay dhigaysaa in bukaanku uu 12 bilood uu ku bixin karo xaddi lacageed oo isku mid ah, ama 24 bilood haddii loo ansixiyo inay duruufo jiraan.
Badh Ka Dhaafida Kharashka ee Qofku Lacagta Iska Bixinayo ee Dhabta Ah (caymis ku jirin):
Waxa jira laba nooc oo qiime-dhimis ah bixinta shaqsiga ee dhabta ah (aan caymis lahayn) oo la siiyo xarunta ku dalacaysa adeegyada caafimaad ahaan lagamamaarmaanka ah. Qiime-dhimista waxa laga dalbaday Adeegyada Maaliyadeed ee Bukaanka (Patient Financial Services) oo waxa lagu muujiyay wax ka beddelada ku saabsan bayaanka bukaanka. Qiime-dhimista waxa la dalbadaa marka bukaanku aanu lahayn caymis oo aanu u qalmin Caawimada Maaliyadeed.
UWMC iyo HMC waxay leeyihiin 30% qiime dhimis ah marka bukaanada aan lahayn caymiska lagu arko waada gargaarka degdega ah.
UWMC waxay leedahay 10% qiime-dhimis ah marka bukaan aan lahayn caymis lagu arko meel ka baxsan qolka waxaada xaaladda degdega ah qofku iska bixinayo.
Marka uu bukaanku galay shil ama cid ku tacadiday, shirkaddooda caymisku guud ahaan ma bixiso kharashka adeeggooda caafimaad marka la ogaado inay cid kale ka masuul tahay. Sidoo kale, bukaanku haddii aanu lahayn caymis balse uu doonayo inay ka bixiso cidda ka bixinaysa kharashka. Markay xaaladdu sidan tahay UW Medicine waxay gudbin kartaa dammaanad ka dhan ah wixii lacag laga bixinayo dhaawaca shakhsi ahaaneed ee mustaqbalka. Foomka dammaanaddu waa mid lagu sugayo danaha dhabta ah ama hantida qofka si amaahda loo bixiyo.
Xisaabaadka Loo Wareejiyay Si Loo soo
Ururiyo: Shaqada waxaa kamid ah:
Wargelinta hore ee lagu wargelinyo dammiinka in uu kaga soo jawaabo 30 maalmood kahor intaan laga warbixin daynta: daynta waxaa laga warbixiyaa maalinta 45aad.
PFS waa inay ansixisaa wixii tallaabo sharci ah ee laga qaadayo xisaab.
PFS oggolaan mayso dacwayn haddii ayna jirin shaqo uu qofku ka shaqeeyaa.
Dacwada ay xaraynayso UWMC iyo HMC waxaa qaban doona Kaaliye Xeer-Ilaaliye oo “Gaar ah” oo la shaqeeya hay’dda.
Xisaabta cidda kale soo celisay waxaa loo aqoonsan doonaa in aan la helaynin waxaana laga saari doonaa Daynta ay inoogu maqan tahay Hay'adda Ururinta Dayntu.
Xisaabta Bukaanka waa in aanay galinin wax ECAs ah1 , UWMC, HMC ama hay’adda ururinta kharashka loo diray, ilaa ay yimaadaan xaaladaha soo socdaa:
Waxaa la sameeyay dadaal macquul ah oo lagu ogaanayo u-qalmidda Kaalmada Dhaqaale.
Waxaa kamid ah dadaalada macquulka ah kuwa soo socda2:
Bukaanka waxaa la siiyaa guudmar luuqad cad ku qoran oo Xeerka Kaalmada Dhaqaale iyo arji kahor intaanu ka bixin isbitaalka waxaana laga caawiyaa in uu arjiga buuxiyo;
Haddii ay na soo gaadho arji aan dhammaystirnayn, oo loo diro qoraal wargelin ah oo xogta/dokumentiyada maqan ah bukaanka oo ay ku jirto wargelinta wixii Isbitaalka ECA ee (ama hay’adda Isbitaalka) inay bilaabi karaan ama halkii ayaa laga sii wadi karaa haddii arjiga ama lacagtii aan la helin muddadaa gaarka h ee la qabtay;3
Dhammaan bayaanada biilasha waxa la socda wargelinta cad oo la xidhiidha helitaanka Kaalmada Dhaqaale taas oo leh taleefan la waco si lo helo xogta/kaalmada iyo cinwaanka websaytka kaas oo nuqullada dokumentiyada Kaalmada Dhaqaalaha laga heli karo;
a.	Buuxinta arjiyada Kaalmada Dhaqaale wakhtiga ku munaasabka ah ayaa lagu mariyaa nidaamka arjiga bukaankana waxaa lagu wargeliyaa qoraal waxa la go’aamiyay, waxaa la siin doonaa bayaanka biilka ugu danbaysay haddii baaqi jiro, waana loo celiyaa lacagta haddii lagu bixiyay lacag wakhtiga la ansixiyey kaasi oo uu xoojiyey arjig.
Isbitaalku waxa uu siin karaa Kaalmo Dhaqaale bukaanka ku hoobta inuu dhiibo xogta/dokumentiyada looga baahnaa oo dhammaystiran ee arjiga Kaalmada Dhaqaalaha.
Bixint guudmarka luuqadda cad ku qoran ee Xeerka Kaalmada Dhaqaale ;
Isku-dayo la sameeyey in afka loogaga waramo bukaanka Xeerka Kaalmada Dhaqaale iyo arjiga Kaalmada Dhaqaale.
Sheegista amaahda ayaa iman karta 150 maalmood kadib qaansheegta koowaad ee isbitaal ka bixidda kadib.
Dadaal ku filan ayaa la geliyay si loo ogaado u-qalmidda bukaanka Kaalmada Dhaqaale.
In si Siman Loola Dhaqmo Dhammaan Bukaanada/Damiinada:
UWMC iyo HMC waxay uga shaqeeyaan xisaabaadka bukaanka qaab waafaqsan xeerkan kharash qaadidda. Xaaladdii doontaaba ha jirtee looma eego hirgalinta xeerkan da’, isir, midab, jinsi, doorashada jinsiga ama waddanka qofku uu ka soo jeedo.
Nuqul xeerkan ah, iyo sidoo kale nuqullo Xeerka Kaalmada Dhaqaale, Guudmarka Luuqadda Cad ku Qoran ee Kaalmada Dhaqaale iyo arjiga Kaalmada Dhaqaale waxaa lagu heli karaa iyada oo lala xidhiidhayo:
1ECAs waxaa kamid ah ka dhigista dammaanad hantida gaarka ah, u sheegista qofka hay'ad dayn ururin, la wareegista mushaharka iyo dalabka kharashka ama deebaajiga kahor inta aan la siin daryeelka caafimaad ee daruuriga ah.
2Isbitaalku ma samaynaynin dadaal macquul ah si uu u ogaado u-qalmidda bukaanka kaliya marka uu bukaanka ka helo ka dhaafis saxeexan, sidoo kale Isbitaalka looma arkayo in uu dadaal macquulka ah sameeyay haddii Isbitaalku caddeeyo in aanu u-qalmin isaga oo ku salaynaya xog la aaminsan tahay inay been tahay ama aan saxsanayn ama bukaanka khasab ama cagajugleyn lagaga qaaday.
3Wixii ECAs la bilaabay waa la hakinayaa.​​